10,6 miliara dolara:TSY NOTROSAIN’I MADAGASIKARA -
AccueilRaharaham-pirenena10,6 miliara dolara:TSY NOTROSAIN’I MADAGASIKARA
08/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nigadona an-tanindrazana, ny talata 6 Desambra teo, ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina rehefa avy niatrika ny Conférence des Bailleurs tany Paris, France, ny 1 sy 2 desambra 2016 teo. Nitondra fanazavana mikasika ny fahazoantsika ilay famatsiam-bola iraisam-pirenena mitentina 10,6 miliara dolara ny tenany teo am-pahatongavana.
Raha miohatra tamin’ny Conférence des Bailleurs de Fonds, ny taona 2013 dia avo dimy heny ny vola azon’i Madagasikara tamin’ity Repoblika fahefatra tarihin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ity.
Nambaran’ny filoham-pirenena mazava tsara kosa fa tsy misy trosan’i Madagasikara na dia « ariary » monja aza amin’io famatsiam-bola azontsika io. « Diso be ny filazana fa midi-trosa indray i Madagasikara”, hoy izy nanamafy.
Raha ny fanazavany hatrany, ny 4 miliara dolara amin’io famatsiana io dia avy amin’ny sehatra tsy miankina avokoa. Izany hoe, tsy misy trosa izany ary tsy mitrosa i Madagasikara. “Avy amin’ny sehatra tsy miankina ireo vola ireo. Izy ireo no mampiasa izany amina foto-drafitrasa maro samihafa, izay hiarahana amin’ny fanjakana na ihany koa ataon’izy ireo manokana. Noho izany, tsy misy trosa mihitsy izany na dia kely aza”, hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Mahakasika ilay 6,4 miliara dolara indray, voalaza fa ny ankamaroany dia arakaraka ny mpamatsy vola. Tamin’izany indrindra no nanomezan’ny filoham-pirenena ohatra ny amin’ny fahazoantsika ny 11è FED avy tamin’ny vondrona eraopeana (UE) izay nomena an’i Madagasikara maimaim-poana tsy misy tambiny. Hiadiana sy ezahina ny ampahany izay omen’izy ireo mba tsy ho trosan’i Madagasikara.
Ankoatra izay, notsindrian’ny filoham-pirenena mafy tamin’izany fa ny fahaiza-mitantana ilay vola hamadihana azy ho tena fampandrosoana no tena zava-dehibe. Nambarany mantsy fa na ireo firenena mandroso toa ny Eropeanina sy Etazonia, sns aza mbola mitrosa.
Niaiky kosa ny filoham-pirenena fa ny tena trosantsika sady mbola babentsika hatramin’izao fotoana izao dia ny fahantrana. Ny hialana amin’izany indrindra anefa no imatimatesan’ny fitondram-panjakana ankehitriny.